မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္တက္တဲ့ စုံတြဲမ်ားအတြက္ - MM Daily Life
မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္တက္တဲ့ စုံတြဲမ်ားအတြက္ပါ … ။
ဒါဆို သင္ဟာ အရမ္းကံေကာင္းသူ တစ္ေယာက္ပါ။ သင့္အေပၚသူ အရမ္းခ်စ္တဲ့ သူမို႔ပါ။စိတ္ဆိုးၿပီး ဖုန္းကို Blockထားေပမယ့္ တျခားဖုန္းနဲ ဖုန္ျပန္ဆက္ေခ်ာ့ မွာကို ေမ်ာ္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ပ ါ။
မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္တိုင္း Facebookကို Blockလိုက္ ဖုန္းကိုBlockလိုက္နဲ အဲလို ခ်စ္သူစုံတြဲေတြရွိလား.?။
မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တက်တဲ့ စုံတွဲများအတွက်ပါ … ။
မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တိုင်း FB/phone Block တက် သူများသာ ဖတ်ရန် ဖုန်းခေါ်လို မအားရင် သေချာပြီ ဒီနေ့ရန်ဖြစ်ရတော့ မယ် ဆိုတာ။
ဒါဆို သင်ဟာ အရမ်းကံကောင်းသူ တစ်ယောက်ပါ။ သင့်အပေါ်သူ အရမ်းချစ်တဲ့ သူမို့ပါ။စိတ်ဆိုးပြီး ဖုန်းကို Blockထားပေမယ့် တခြားဖုန်းနဲ ဖုန်ပြန်ဆက်ချော့ မှာကို မျော်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။
သင့်ပေါ် စိတ်ဆိုး တိုင်း Blockတိုင်း သင်ဘက်က တခြားနည်းနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ် ပြီးရှင်းပြပါ။
မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တိုင်း Facebookကို Blockလိုက် ဖုန်းကိုBlockလိုက်နဲ အဲလို ချစ်သူစုံတွဲတွေရှိလား.?။
စိတ်ဆိုးတိုင်း စကားအကြမ်းတွေနဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အကျိတ်အနယ်ပြောပြီ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မဆက်သွယ်ဘဲ နေခဲကြပြီး မကြာပါဘူး ပြန်ဆက်သွယ်ပြီး ခုချိန်ထိ ရန်ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ခွင့်လွတ်ပြီး ဆက်တွဲနေကြ ဆဲမလား။
အဲလို နဲရန်ဖြစ် Block ဖုန်းပိတ်ပြီးအိပ်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေ ဘယ်နှစ်ရက်တောင် ရှိပြီလဲ?။ ဒါဆိုသင်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြလို့ပါ။
ဒီအချက်တွေဟာလည်း သင်အပေါ်သင့်ချစ်သူ ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသိသာလွန်းလှပါတယ်။
အရမ်းသဝန်တို ချူပ်ချယ်လွန်း တယ် ထင်ရပေမဲ့ သင့်ကို အရမ်းချစ် လိုပါ သင် ဘက် ကနားလည် အောင်း ရှင်ပြသင့်ပါတယ် ။ အဲလို ချစ်သူမျိုး ပိုင်ဆိုင် ထားရင် တန်ဖိုးထား သင့်ပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ရဲ့ Acc ကိုBlockထားပေမဲ့ တစ်ခြားအကောင့်ကနေ သူဘာတွေ တင်လည်း သူဘာတွေ လုပ်နေလည်း ဘယ်သူတွေက Commentတွေမှာ ဘာတွေ မန့်လည်း
တစ်ယောက် အကောင့်ကို တစ်ယောက် ခိုးကြည့် ဘူးလား?။ ဒါဆိုသင်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြ တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပါ။
ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း တစ်ယောက် ဖုန်းတစ်ယောက် Blockထားပေမယ့် တစ်ခြားဖုန်းနဲ သူဘာလုပ်နေလည်း ဘယ်သူ နဲပြောနေလည်း သိခြင်လို ဖုန်းဆက်ကြည့် ဘူးကြတယ် မဟုတ်လား?။ ဒါတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြ တဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြလို့ပါ။
အခုလိုတွေ ရန် ခဏခဏဖြစ်နေကြ လို စိတ်ညစ်နေ ပြီလား?။ စိတ်မညစ် ပါနဲ ဒီစာလေးဖတ်ပြီးတာနဲ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် နားလည်မူ ယူပါ။ ညှိနိူင်းပါ။ သူဘက်ကိုယ့်ဘက်မျှတွေးပါ။
သင့်ချစ်သူကို တောင်းပန် လိုက်တာဟာ သင့်သူကို ဘယ်လောက် ချစ်တယ်ဆို တာပြ လိုက်တာ ပါ။ ချစ်တဲ့ သူတိုင်း ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖန်တီးနိုင်ပါစေ။